तपाईंको यात्रा ब्लग आज सुरू गर्नुहोस्! | सडकको लागि एक युगल
ब्लगिङ यात्रा लेखकहरू, प्रभावकारी व्यक्तिहरू वा सोच्ने सोच र जनताको विचार बढाएर निम्न प्राप्त गर्न खोज्नेहरू भन्दा बढीको लागि हो। ब्लगिङ, वास्तवमा, कुनै पनि उद्यमी प्रयासको एक जटिल भाग भएको छ र एक कार्य जो कि फर्चुन स्तरको कम्पनीहरू संलग्न छन्। यो एक तरिका हो जुन कुनै व्यवसाय, कुनै पनि विशेषता वा ठाडो हो, जडान गर्न र तिनीहरूका दर्शकहरूलाई सूचित गर्दछ। तर, तपाईंलाई थाहा छ कसरी यात्रा ब्लग सुरू गर्ने?
यात्रीहरूको लागि, ब्लगिङ अनन्त यात्राको लागि विश्वव्यापी प्रविष्टिको रूपमा हेरिएको छ, भुक्तानी-छुट्ट्याउने छुटहरू, प्रायोजन, पैसा, र कुपोषण। सच्चाइ भनेको एक यात्रा ब्लग सुरु गर्दै गर्न सक्छन् ती सबै चीजहरू हुनुहोस्, तर तपाईलाई के गरिरहनु भएको छ।
त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न दुई तरिकाहरू छन्; या त परीक्षण र त्रुटि (जो सदा लिन सक्दछ) सिक्न सकिन्छ, वा अरु कसैको ज्ञानको प्रयोग गरिसकेको छ जुन पहिले नै गल्तीहरू गरेको छ, उनीहरुबाट सिकेका हुन्छन्, उनीहरुका ब्लगहरु लाई ग्राउन्डबाट टाढा बनाइदिएका छन्, र कुकुरले त्यो बाटोलाई सुरू गरेको छ।
त्यो जहाँ यो मार्गदर्शक आउँछ।
जब हाम्रो पहिलो पोस्ट डिसेम्बरमा जीपुगेको थियो, 2016, हामीले वास्तवमा त्यस वर्ष मईमा रोडको लागि एक युगल सुरु गर्यौँ। हामीले गलत गल्ती गरे, गल्तिहरूको प्रकार जुन तपाईबाट पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर समय र पैसा खर्च गर्ने गल्तीहरू कुनै पनि कम। हाम्रो यात्रा ब्लग सुरू गर्न सिकाउने सबै भन्दा कठिन कुरा हो जुन हामी मध्ये कुनै पनि गरेन - टाढा सम्म। यदि हामीले जान्थ्यो भने हामी अहिले जान्दछौं, र हामी के भन्छौं, हामी तपाईंलाई बताउनेछौं, हामी धेरै समस्याहरू बचायौं।
यात्रा ब्लगिङले हामीलाई विश्वव्यापी रूपमा यात्रा गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, इन्फिसेन्सरहरूसँग जडान गर्न बन्नुहोस् प्रभावकारी, र एक क्षेत्रमा आवाज छ जहाँ हामी भावुक छौं। यदि तपाईं सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको लागि पनि गर्न सक्छ!
के तपाईं आफ्नै सुरु गर्न चाहनुहुन्छ?
यो विस्तृत गाइडले तपाईंलाई कसरी देखाउनेछ कि तपाईको आफ्नै यात्रा यात्रा कसरी सुरुवात गर्नेछ, छिटो, सरल तरिकामा!
चरण 1: एउटा नाम छनौट गर्नुहोस्
"नाम मा के छ?" ठीक छ, ब्लगिंग मा, सबै नाममा छ। मलाई गलत नगर्नुहोस्, तपाईं केवल एक सरल नाम छनौट गर्न र तपाईंको साइटमा हजारौं बगाल हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तर खराब ब्लग नामले तपाइँलाई सुरू गर्नु अघि तपाइँलाई तोड्न सक्छ। गलत ब्लग नाम कबूतर-होलले तपाईंलाई छोटो छोटो स्थानमा राख्न सक्छ, तपाईलाई कहिलेकाहीँ खोज ईन्जिनियरिङ्मा सान्दर्भिक बनाइदिन्छ र यहाँ पनि do तपाईलाई अवस्थित छ। त्यसोभए तपाई कसरी ठूलो ब्लग नामको साथ आउन सक्नुहुन्छ काम गर्दछ, र काम जारी राख्नेछ? यहाँ केही सरल कुञ्जीहरू छन्।
लामो समय सोच्नुहोस्
तपाईंको ब्लग नाम परिवर्तन रेखालाई अविश्वसनीय रूपमा गाह्रो छ, र यो प्लेग जस्तो टाढाको कुरा हो। तपाईं नाम छनौट गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाई आजको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ किनभने यो अब देखि दस वर्ष हुनेछ।
उदाहरणका लागि, हामीले ती व्यक्तिहरूका ती twenties वा thirties मा लिखित ब्लगहरू देखेका छौं जुन उमेर-विशिष्ट ब्लग नामहरू "ट्वान्टी-केहि यात्रा" जस्ता छन्। त्यो नगर्नुहोस्। तपाईले 30 लाई कहिले हुन्छ? तपाईंको ब्लगको ब्रान्डिङ अब कुनै पनि अर्थ बनाउन सक्दैन, किनकि यो जीवनमा तपाईं कहाँ छन् भन्ने सत्य हुनेछैन।
जहाँ तपाइँ बस्नुहुन्छ पछि एक ब्लगको नाम नगर्नुहोस् वा तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भने जब सम्म तपाइँ विशेष गरी यस क्षेत्रमा लेख्नुहुन्छ - र त्यसो गर्ने योजना बनाउनुहोस् सदाको लागि। यदि तपाईं ओहियोबाट गर्व गर्नुहुन्थ्यो भने, तर तपाई ग्लोबल गन्तव्यहरूको बारेमा लेख्नुहुन्छ, तपाईंको ब्लग "ohioguytravels.com" नाम नदिनुहोस्।
ट्रेसी रोडको लागि एक युगलको साथ आयो, र यो हामी तुरुन्तै हामीसंगै बस्यो। हामी यात्रा ब्लग सुरू गर्न चाहन्थ्यौं, र ब्रान्डिङ छ जसले हामीलाई हाम्रो 60s मा फिट गर्नेछ र यो अहिले हाम्रो 30s मा हुन्छ। आज, हामी दक्षिण फ्लोरिडामा बस्छौं र संसार यात्रा गर्दछौं। सडकको लागि एक युगल भावना बनाउँछ। अब देखि तीस वर्ष, हामी जहाँ पनि जहाँ बस्छौं, यो अझै पनि अर्थ बनाउनेछ।
नम्बरहरू र संकेतहरू बचाउनुहोस्
साधारण नियम यहाँ - यदि तपाईले कसैलाई ब्लग नाम बताउन सक्नुहुन्न र त्यसलाई दस को बाहिर सही9मा सही लेख्नुहोस्, त्यो नाम प्रयोग नगर्नुहोस्। चलो तपाईं ब्लगको साथ एकदम लामो व्यक्ति हुनुहुन्छ, र तपाइँले तपाइँको ब्लगको नाम 7-फुट यात्री। जब तपाईं मलाई ब्लग नाम बताउनुहुन्छ, मसँग धेरै प्रश्नहरू छन्।
के यो "7" वा "सात" हो?
के यो "फुट" वा "फिट" हो?
त्यहाँ "7" र "फुट" को बीच हाइफन छ?
तपाईंको शब्दको-आधा ट्राफिकको आधाले तपाइँको साइटमा कहिल्यै पनि बनाउँदैन।
Cliches र Overused शब्द / वाक्यांशहरु लाई बचाउनुहोस्
यो ठाउँमा भ्यागुन्ड, कोटाड, कोटाडिक, साहसी, भंग गर्ने, र यात्रा / यात्रीहरू यति धेरै अचम्म लागेका छन् कि ब्लगमा यसको कुनै पनि प्रयोग श्वेत शोर हुन्छ। यसको अतिरिक्त, एक दशक को लागी पहिले ब्लगरगर्स पहिले देखि नै या अधिक छ कि उन नामहरु ले लिया र यसको आफु बनाइयो, त्यसैले यो तपाईं मूल को देखो।
Nomadic मैट विश्व को सबै भन्दा ठूलो यात्रा ब्लग छ, यसैले तपाईंलाई लाग््छ कि कुनै को पनि वास्तव मा यदि तपाईं Nomadic जेफ हो परवाह गर्नेछन्? विशेषज्ञ वगाबond अमेरिकामा सबैभन्दा रोमाञ्चक साहसिक ब्लगर हो। के तपाईं स्मार्ट वगाबond तपाईंको लागि भेदभाव हुने जाँदै हुनुहुन्छ?
एक विचार पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ, र गर्न को लागी पहिलो हुनुहोस् कि। यसले केही अतिरिक्त समय र प्रयोग लिन सक्छ, तर यो यसको लायक छ।
यसलाई यादयोग्य बनाउनुहोस्
छोटो शब्दहरू अधिक ज्ञात छन्, किनकि ज्ञात वाक्यांशहरूमा चालाक परिवर्तनहरू छन्। लेखकहरूले उनीहरूको कत्तिको स्मार्ट हो भनेर प्रमाणित गर्न चाहने प्रवृत्ति छ सबै समय, र प्रायः यो नाम चयन को अतिसंवेदनशीलता हुन्छ। तपाईंसँग एक उत्कृष्ट शब्दावली हुन सक्छ, तर त्यो तपाईंको लेखनमा भर दिनुहोस। तपाईंको ब्लग "euphoricallyoptimistictraveler.com" नाम नगर्नुहोस्। यहाँ औंठाको एक ठूलो नियम छ:
यदि तपाईंको नाम ध्वस्त हुन्छ स्मार्ट, यो शायद धेरै जटिल छ। यदि यो लाग््छ चालाक, तपाईं सही ट्रयाकमा हुनुहुन्छ।
यात्रा, र प्रसिद्ध रेखाहरु को बारे मा पुराना फिलिमहरु को बारे मा सोचें। यात्राको बारेमा उद्धरणको बारेमा सोच्नुहोस्। हेर्नुहोस् यदि तपाई यसलाई बिचमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। केहि कुरामा आफ्नो स्पिन बनाउनुहोस् जुन ध्वनि हुन सक्छ परिचित कसैलाई, तर अधिकृत छैन।
तपाईंको विचारहरू परीक्षण गर्नुहोस्
तपाइँ नाममा बसनु अघि, तपाईंले मान्छेलाई थाहा छ र विश्वासमा केहि विचारहरू परीक्षण गर्नुहोस्। तपाईंलाई सत्य बताउन उनीहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस्। "जॉन, यदि यी सब चूसना, मलाई बताओ उनि चूसना। तपाईं के सोच्नुहुन्छ ... "यदि तपाईं मानिसहरूका लागि आकर्षक र रोचक छैन चिन्छु, त्यसपछि यो निश्चित रूपमा तपाईं मानिसहरूलाई हुनेछैन के छैन चिन्छु।
एकपटक तपाईंसँग केहि चीज भएको बेलामा सही देखिन्छ, र तपाईंले जान्नुभएका व्यक्तिहरूबाट राम्रो जवाफ पाउनुहुन्छ, यो चरण2मा जानु पर्ने समय हो।
चरण 2: तपाईंको ब्लगको लागि होस्टिंग छनौट गर्नुहोस्
होस्ट छनौटले तपाईंको स्थानको सबै डेटा बस्दछ जहाँ ठाउँ छान्नुको अर्थ हो। ब्लग कुनैपनि वेबसाइटसँग उस्तै छ, किनभने यसमा विभिन्न प्रकारको जानकारी समावेश हुन्छ। यो डाटा, कम्प्यूटर कोड, डेटाबेस जानकारी, फोटोहरू, लेखहरू र फाइलहरूको रूपमा आउँछ जुन तपाईको वेबसाइट समावेश गर्दछ। यी होस्टहरू सर्भरहरू प्रयोग गर्दछ, सामान्यतया ठूलो डेटा केन्द्रमा पूर्ण यी सर्भरहरूको, सबै ग्राहकहरूलाई प्रयोग गर्न र भण्डारण गर्न सबै डेटाहरू भण्डार गर्न र भण्डारण गर्न। जब कसैले तपाईंको साइटमा लगाउँछ भने, तिनीहरू ब्यवस्थापन गरेको तरिकामा ती सर्भरबाट जानकारी खिच्दै छन्। भावना बनाउनुहुन्छ?
होस्टिंगले धेरै ठाउँ लिन्छ, र यो धेरै महंगी हुनेछ र आफ्नै सर्भरमा आत्म-भण्डारको लागि गहिरो प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ। सौभाग्य देखि, त्यहाँ असंख्य कम्पनीहरू छन् जसले पनि होस्टिंग सेवा प्रस्ताव गर्ने तपाईंलाई आफ्नो वेबसाइट यूआरएल खरीद गर्न अनुमति दिन्छ (तपाईंको नाम नाम द्वारा जान्छ)।
तपाईं WordPress मा तपाईंको साइट निर्माण गर्न किन आवश्यक छ
हामी चर्चामा जान्छौं कि हामी कुन होस्टिङ प्लेटफर्म प्रयोग गर्छौ र अनुशंसा गर्छौ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जुन धेरै नयाँ ब्लगरहरू भ्रष्ट हुन्छन् जुन उनीहरूको समय, पैसा, र हृदयको दुखाइ समाप्त हुन्छ। if तिनीहरू कहिल्यै त्रुटिको अनुभव गर्छन्। यदि तिनीहरू गर्दैनन् भने, उनीहरूको ब्लग अत्यन्तै मिल्दैन भन्ने सम्भावना छ, र समयको समयमा वृद्धिको कमीमाथि तिनीहरूको निराशाले तिनीहरूलाई छोड्ने नेतृत्व गर्नेछ। यस्तो हुन्छ सधैँ। ब्लगरहरूले गलत मार्गलाई सुरू गर्न, कुनै पथ जुन जहाँ पुग्छ, कहिल्यै यो महसुस गर्न असफल हुन्छ, र अन्ततः एक सजिलो गल्तीको कारण असफल हुन सक्दछ जुन तिनीहरूले सही गर्न सक्थे।
त्यसोभए ठूलो कुरा के हो? जानकारी को यो कुञ्जी टुक्रा के हो?
तपाईंको वेबसाइटमा निर्माण गर्नुहोस्!
यो हामीले गल्ती गरिसकेका गल्ती हो, जुन हाम्रो लागि समय, पैसा, र स्रोतहरूको ठूलो बर्बादी भयो। हामी लगभग निस्कनुभयो, वास्तवमा, किनकि हामी एभरेष्टबाट सुरु गर्न जान्थ्यौं।
जब हामीले रोडको लागि एक युगल सुरु गर्यौँ, हामीले गोडी ड्याण्ड र विक्समा केही सानो वेबसाइटहरू चलायौँ। तिनीहरू सेटअप आधारभूत वेबसाईटहरू, सजिलो रूपमा सस्तो (सजिलो: तिनीहरू सस्तो छैन), र स्थानीय वेबसाइटहरूका लागि उचित सजिलो सजिलो हुन्छ जुन ट्राफिकको लागि मुखको वचनमा भर पर्नेछ।
यद्यपि, यदि तपाई चाहानुहुन्छ भने Google बाट कुनै पनि ट्राफिक, वा कुनै अन्य खोज इन्जिन, तपाईंले WordPress प्रयोग गर्नु पर्छ। प्राथमिक कारण तरीका हो कि WordPress साइटहरु गोडaddy वा वििक्स जस्तै साइटहरु द्वारा कोडित छन्। जब हामीले Wix मा सडकको लागि एक युगल सुरु गर्यौं, हामीले एनालिटिक्स खोज ट्राफिकमा बस्यौ शून्य तीन महिना भन्दा बढी। शून्य, जस्तो पनि, पनि होइन एक। हामीले कारणको अनुसन्धान गरिसकेपछि, हामीले फेला पार्यौं कि वर्डप्रेस-आधारित साइटहरूमा कोड धेरै छ leaner Wix जस्ता अन्य साइटहरू भन्दा कम, अर्थ भनेको कम अनावश्यक "filler" कोडसँग पढ्न सजिलो छ।
छोटोमा, यो राम्रो कम्प्यूटर कोड राम्रो टेक्नोलोजीमा राम्रो विकासकर्ताहरूले बनाएको छ।
तपाईंको साइटको लागि Google खोज (वा बिंग, वा सफारी, वा अन्य चीज) देखाउनको लागी खोजी इन्जिन साइट क्रल गर्न र सामग्री पढ्न "बोट्स" प्रयोग गर्दछ। खोज इञ्जिन बटहरू (अनिवार्य रूपमा, स्वचालित कोडिङ बगहरू जुन साइटहरू स्क्यान गर्न र रेकर्ड जानकारी पठाइएको छ) क्वाइनकी कोडिङ पढ्न सक्दैन। अन्य शब्दहरूमा, यदि यो Wix मा बनाइएको साइट क्रल गर्ने प्रयास गर्दछ भने, सामान्यतया सामग्री बनाउन कोडिङ पढ्न सक्दैन। प्रभाव?
यदि साइट खराब रूपमा कोडित छ भने, बोटले जानकारी क्रल गर्न सक्दैन।
यदि बटले जानकारी क्रल गर्न सक्दैन भने, यसलाई भण्डारण गर्न सक्दैन।
यदि यो जानकारी भण्डारण गर्न सकिँदैन, यसले जानकारी इन्जिनसँग दर्ता गर्न सक्दैन।
यदि खोज इञ्जिनले जानकारी प्राप्त गर्दैन भने, यो साइटलाई बेवास्ता गर्दछ यद्यपि यो अवस्थित छैन।
यो हुन्छ जब, तपाईं कहिल्यै कुनै पनि जैविक ट्राफिक पाउनुहुनेछ। शून्य। Zilch। नाडा।
यसकारण अधिकांश वेबहरू वर्डप्रेसमा बनाइएका छन्, किनभने कोडिङ दुबई र खोजी इन्जिन बट द्वारा क्रल गर्न सजिलो हुन्छ। साथै, वर्डप्रेस विषयवस्तुहरूमा प्रकार्यताहरू Wix वा GoDaddy जस्ता साइटहरू भन्दा धेरै भन्दा बढी छन्।
तर, वर्डप्रेस हो छैन एक वेब होस्ट। कुनै वर्डप्रेस स्टेशनमा कुनै सर्भरहरू छैनन् जुन सामग्री तपाईंको साइटमा राख्छ। तथापि, कतिपय प्रतिष्ठित अनलाइन वेब होस्टहरू जसले वर्डप्रेससँग साझेदार बनाउँदछ र एक विश्वसनीय वेबसाइट निर्माण गर्ने प्रक्रिया बनाउँदछ। ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्षम छ कुरकुरा र सजिलो।
Bluehost - हाम्रो सिफारिश को शुरुवात को लागि होस्टिंग प्रदाता
जब हामीले विक्सबाट परिवर्तन गर्न निर्णय गर्नुभयो, हामीले गरे धेरै अनुसन्धानको। जबकि त्यहाँ होस्ट अलग प्रदायकहरू जसले सम्मानित छन्, धेरै साइटहरूको फरक आकार र ट्राफिक मात्राको लागि बनाइएका छन्। तपाईंको साइट ठूलो हुन्छ, र तपाईले अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्नुहुने, तपाईंको वेब होस्टमा अधिक दबाव राखिएको छ, जसको अर्थले तपाईंलाई ठूलो र बलियो होस्ट छान्न आवश्यक छ।
तथापि, कुनै पनि नयाँ ब्लगरको लागि उत्तम होस्ट (हाम्रो रायमा) BlueHost। हामी अझै पनि एक वर्ष पछि ब्लूहोस्टमा छौं, र तिनीहरूको प्रदर्शन, ग्राहक सेवा, र लागत बकाया भएको छ! पछि रेखालाई हामी ठूलो सेवामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, तर यीमध्ये धेरै लागत $ 200 बाट $ 1,000 बाट कहीं पनि ठूलो ब्लगहरू महिना सर्भरमा साइटको "लोड" मा निर्भर गर्दछ। जुन तपाईं त्यो स्तर पुग्नुहुन्छ, तथापि, यो यसको लायक छ।
तथापि, तथापि, निश्चित रूपमा जानुहोस् BlueHost। साइन अप अविश्वसनीय रूपले सजिलो छ, र यहाँ यो कसरी प्राप्त गर्ने बारे एक सिंहावलोकन हो!
चरण 1 - तीर बटनमा क्लिक गर्नुहोस् जुन "अब सुरू गर्नुहोस्" भन्नुहोस्, ती मोडललाई संकेत गर्दै तीरको साथ।
चरण2- तपाईंको योजना छान्नुहोस्।
चरण3- तपाईंको डोमेन नाम उपलब्ध छ भन्ने निश्चित गर्न "नयाँ डोमेन" खोज प्रयोग गर्नुहोस्।
चरण4- कुनै अतिरिक्त सुविधाहरू थप्नुहोस्, र डोमेनमा वर्डप्रेस स्थापना गर्नुहोस्।
केहि गोपनीयता गोपनीयता खरिद गर्न विश्वास गर्दछ, तर Google लाई सार्वजनिक रूपमा भनिएको छ कि तिनीहरूको एल्गोरिथ्मले तपाइँको स्तरको ग्रेडिंगमा डोमेन "निजी" हो कि होइन वा होइन भनेर बुझ्दछ विश्वास गर्नुहोस्, "निजी" प्रयोगक्षेत्रहरूको साथमा उनीहरूलाई लुकाउन केहि छँदैछ। यद्यपि, यदि तपाइँ वेबसाइट र सार्वजनिक रूपमा तपाईंको नाम र ठेगानाको बारेमा घनिष्ठ हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई सम्झाउनु राम्रो छ कि यो सम्भवतः Google एल्गोरिथ्मको अपेक्षाकृत सानो घटक हो।
एकपटक तपाईं "WordPress" बटन क्लिक गर्न तयार भएपछि, तपाईं चरण3को लागि तयार हुनुहुन्छ।
चरण 3: WordPress स्थापना गर्नुहोस्
अर्को कारण तपाईं WordPress बाट एक होस्ट माध्यमबाट प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, जस्तै BlueHost, तपाईंको वेबसाइट साँच्चै नै हुनेछ तिम्रो। तपाईंसँग एक अद्वितीय यूआरएल हुनेछ, जस्तै "acouplefortheroad.com" को रूपमा, "acouplefortheroad.wordpress.com" को सट्टा।
यसको अतिरिक्त, सीधै Wordpress.com मा जाँदै हुनुहुन्छ मतलब तपाईं आफ्नो साइट को स्वामित्व छैन, वर्डप्रेस गर्दछ। यस्तो रूपमा, तपाइँ आफ्नो साइटमा विज्ञापन बेच्न अधिकार छैन, प्लग इनहरू (पछि महत्त्वपूर्ण हुनेछ) स्थापना गर्नुहोस्, विषयवस्तुहरू अनुकूलित गर्नुहोस् वा तपाईंको साइटलाई मापदण्ड गर्न Google Analytics प्रयोग गर्नुहोस्।
जब तपाइँ माथि "देखाइएको छ" बटन क्लिक गर्नुहुनेछ, माथि देखाइएको छ, तपाईले तपाईको BlueHost cPanel मा साधारण स्थापना प्रक्रियाको माध्यमबाट नेतृत्व गर्नुहुनेछ। जब तपाइँले यसलाई सोध्नुहुन्छ कि तपाइँ यसलाई स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ जहाँ, तपाइँको डोमेन रोज्नुहोस् (ex: http://acouplefortheroad.com).
एक पटक स्थापित, तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डको साथ आफ्नो WordPress ड्यासबोर्डमा पहुँच पाउनुहुनेछ, जसको दुवै तपाई दर्ताको समयमा प्रयोग भएको इमेलमा पठाइने छ। तपाईंको ड्यासबोर्ड तल फोटोको सरल संस्करण जस्तो देखिन्छ, जुन हाम्रो हालको ड्याशबोर्ड हो।
एकपटक तपाईं आफ्नो डैशबोर्डमा आइपुगेपछि, तपाईं आफ्नो ब्लग निर्माण सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ!
चरण4- सिक्न कसरी प्रयोग गर्नुहोस् WordPress
जब तपाईं वर्डप्रेसको साथ सुरू गर्दा ती डरलाग्दो डरलाग्दो छ, तर यो वास्तवमा आवश्यक छैन। वेबसाइट इमारतको राजाको रूपमा वर्डप्रेसको स्थितिको कारण, तपाईसँग कुनै प्रश्नहरूको लागि असंख्य ट्यूटोरियलहरू अनलाइन उपलब्ध छन्। थप रूपमा, तपाईले वर्डप्रेसको साथ प्रयोग गर्न सक्ने सबै भन्दा धेरै विषयवस्तुहरू समर्थन टोलीहरू छन् जुन कुनै पनि समस्याको साथ मद्दत गर्नेछ। प्रश्नहरूको जवाफ दिने सन्दर्भमा हामीले सबैभन्दा भरपर्दो स्रोतहरू YouTube मा, जहाँ ह्यान्ड-इन भिडियोहरूले तपाईको साइट निर्माण गर्न कसरी सुरु गर्ने बारेमा लगभग कुनै पनि प्रश्नको आवरण गर्दछ।
सौभाग्य देखि, वर्डप्रेस एक छ शुरुवातका लागि सजिलो मार्गदर्शक सुरू गर्न कसरी उत्तम भाग भनेको यो पुरा तरिकाले प्रयोग गर्न नि: शुल्क छ!
तपाईं केहि समय खर्च गर्न चाहानुहुन्छ तपाईंको डेशबोर्डको वरिपरि, पृष्ठहरू कसरी थप्न, पोस्टहरू सिर्जना गर्ने, र मिडिया अपलोड गर्नुहोस् जस्तै PDFs, भिडियोहरू, र फोटाहरू जस्ता विभिन्न प्रकार्यहरू प्रयोग।
चरण5- एउटा विषयवस्तु चयन गर्दै
तपाईंको "विषय" आधारभूत कंकाल हो जुन तपाईंको साइट निर्माण गरिनेछ। त्यसैले कि मानिस कुनै साइट निर्माण गर्न को लागी केहि नहीं शुरू गर्न को लागि, सचमुच यिनी विषयहरु को हजारों देखि चुनने को लागि उपलब्ध छ।
आधारभूत दुविधा निःशुल्क नि: शुल्क बीच चयन गर्न छ, तपाईंको WordPress ड्याशबोर्डबाट उपलब्ध छ, वा व्यावसायिक ब्लग विषयको लागि भुक्तानी। यदि तपाईं आफ्नो साइटमा पैसा बनाउनको लागि गम्भीर हुनुहुन्छ भने, एक पेशेवर विषयवस्तु छान्नुहोस्।
यी विषयवस्तुहरू सामान्यतया $ 35 - $ 100 बाट चलाउछ, केहि सँगको साथ $ 150 सम्मको शीर्ष-अन्तमा। यो सामान्यतया एक-पटक शुल्क हो, तथापि, र एक पटक फाइल छ जब तपाईं चाहानुहुन्छ (धेरै साइटहरूमा पनि)।
हामीले केहि फरक विषयवस्तुको साथ खिलौट गरेका थियौ, तर हामी हालै चलिरहेका छौं StudioPress मार्फत हो, र यसलाई परिमार्जित प्रो भनिन्छ। स्टुडियोपेज हजारौं विषयहरूको लागि एक उत्कृष्ट स्रोत हो, जसमध्ये धेरैका संसारका सबै भन्दा ठूलो वेबसाइट र ब्लगहरू प्रयोग गरिन्छ।
हामी StudioPress को बारेमा के प्रेम छ यसको उत्कृष्ट ग्राहक सेवा र उपयोग को आसानी। यहाँ, तपाइँ अनुकूलन वा डिबग गर्ने समस्याहरूको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ, र समर्थनले तपाईंलाई तपाईको साइटको रूपमा हेरिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ।
चरण6- अपलोड प्लगइनहरू
वर्डप्रेस प्लगइनहरू तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोगहरू हुन् जुन तत्काल मैन्युअल रूपमा कोडिंग थप्न वा वेबसाइटको वास्तविक फाइलहरूमा जाँदै जान्छ र अत्यधिक टेक्नोलोजी कार्यसँग काम गर्न तत्काल निर्माण कार्यक्षमता मद्दत गर्दछ। तपाइँले केवल प्लगइन अपलोड गर्नुभयो, त्यसलाई सक्रिय पार्नुहोस् र तपाईलाई चाहानु भएको सेटिङ समायोजन गर्नुहोस्। त्यो हो!
प्लगइनले विभिन्न मुद्दाहरू मद्दत गर्न सक्दैन, ई-मेल सूचीहरू, मोबाइल-अनुकूल अवलोकन, डेटाबेस अप्टिमाइजेसन, एसईओ, स्प्याम रोकथाम, र साइट ब्याकअप अप सहित। यहाँ केहि छन् जुन हामी प्रयोग गर्दछौं र सिफारिश गर्दछौं।
Akismet- यो तपाईंको टिप्पणी खण्डमा स्प्याम फिल्टर हो, र यो धेरै प्रभावकारी छ। त्यहाँ केहि टिप्पणीहरू छन् जुन यसको गार्डको माध्यमबाट छरिएको छ, तर तपाइँसँग अझै पनि यो अनुमोदन वा टिप्पणी रद्द गर्ने विकल्प छ।
सबै-इन-वन SEO- Google खोजीको लागि तपाईंको लेख अनुकूलन गर्न यो एक आवश्यक प्लग इन हो। तपाईं मेटा ट्यागहरू सिर्जना गर्नुहुनेछ, वर्णनहरू, साइटम्याप्सहरू सिर्जना गर्नुहोस्, र पनि तपाईंको साइट Google Analytics मार्फत जडान गर्नुहोस्।
ब्याकअपगुआर्ड - तपाईं कभी पनि आफ्नो साइट धेरै अधिक ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्न। वर्डप्रेस डाटाबेसले तपाइँले कहिल्यै लेखेको प्रत्येक शब्द राख्छ, र यदि तपाईंको ब्लगले तपाईंलाई केहि डलर बनाउन सुरु गरेको छ भने, तपाईं नियमित ब्याकअप राख्न नटट हुनेछ। ब्याकअपगुआर्डले यसलाई पूर्ण रूपमा गर्दछ। जगेडा अनुसूची गर्ने क्षमताको साथ, तपाईंलाई मैन्युअल रूपमा यो बारे चिन्ता गर्नुपर्दैन (विशेष गरी हामीलाई बीचमा बिर्सने को लागी उपयोगी)। त्यहाँ ड्रपबक्स, Google ड्राइभ, र अन्य क्लाउड स्टोरेज सेवाहरूमा जगेडा अपलोड अपलोड गर्ने विकल्प पनि छ, यकिन गर्नुहोस् कि यदि सबै भन्दा खराब हुन्छ भने तपाईंको डेटा सुरक्षित हुनेछ।
सजिलो सामाजिक शेयर बटन- तपाईंको लेखहरूको लागि राम्रो सोशल मिडिया साझा बटनहरू। यी सामग्रीहरू तपाईंको सामग्री फैलाउन को लागी सबै कोसिस गर्न मद्दत गर्दछ!
Relevanssi - जबकि वर्डप्रेसले धेरै चीजहरू राम्रो बनाउँछ, यो राम्रोसँग गर्दैन, तपाईंको साइटमा खोजी प्रकार्य थप्दैछ। Relevanssi यो फिक्स गर्दछ र तपाईंको पाठकहरूलाई तपाईंको साइटमा खोज गर्दा सबै भन्दा सही नतिजा दिन्छ।
सुमो - एक अनुप्रयोगले विभिन्न पप-अपहरू, ई-मेल साइन-अपहरूको लागि स्वागत म्याटहरू र स्लाइडरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ र कार्यलाई कल गर्दछ। यसको अतिरिक्त, सुमोले सामाजिक सञ्जाल साझेदारी र छवि साझेदारीको लागि मड्यूल पनि गरेको छ!
WPtouch- यदि तपाईं नि: शुल्क वा सस्तो विषयवस्तुको साथ जानुभयो भने, तपाइँले तपाइँको वेबसाइटलाई मोबाइल अनुकूलन बनाउन WPtouch को आवश्यकता पर्नेछ। अधिकांशका लागि वेतन विषयवस्तु पहिले नै मोबाइल उत्तरदायी सक्षम छन्।
WP-Optimize- तपाईंको WordPress डाटाबेस सफा र स्वस्थ राख्न, तपाईंलाई समग्र साइट प्रदर्शन र गति सुधार (Google को रैंकिंग एल्गोरिदममा अर्को कारक) मा सुधार गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
चरण 7: ग्राउन्ड अफ गर्दै
सफलताको चरणहरू छन् जुन ब्लगिङ सुरु गर्दा आवश्यक छ - तपाईले तपाइँको पहिलो पोस्ट जारी गर्नु अघि पनि! यो यहाँ छ कि तपाइँ एक ठोस र स्थिर आधार सेट गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको साइट बढ्दै जानेछ, जस्तै कुनै पनि घरलाई पूर्ण बनाइनु अघि ठोस आधार चाहिन्छ।
आधारभूत संरचना संरचना सिर्जना गर्नुहोस्
सोच्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो साइट कसरी हेर्न चाहानुहुन्छ, र विशेष गरी, तपाइँ कुन पृष्ठहरू सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंले सफल यात्रा ब्लगरहरूबाट विचारहरू उधारो लिन सक्नुहुन्छ वा रोग्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईको साइटमा केही आधारभूत पृष्ठहरूको आवश्यकता छ जुन कुनै पनि सफल ब्लग बीचको सामान्य हो।
स्वागत छ - यो तपाइँको वेबसाइट हो "हैंडशेक" हो। यो पाठक उत्तेजित र सूचित गर्न को लागी, साथ नै आफ्नो साइट मा गहिरो जाने को लागी स्पष्ट स्पष्ट नेभिगेसन पाउनु पर्छ। यो पृष्ठ हो जहाँ तपाईं कार्यमा तपाईको कलको क्रियाकलापमा प्रायः राखिएको छ, तपाईको यात्रा ब्लगमा नेविगेट गर्ने, हाम्रो पृष्ठ बारे, ल्यान्डिङ पृष्ठहरू, गन्तव्य अवलोकन, र अरु केहि महत्त्वपूर्ण भेट्टाइने बारे कसरी। सधैँ निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको स्वागत पृष्ठ डिजाइन डेस्कटप र मोबाइल संस्करणहरूमा राम्रो देखिन्छ।
यात्रा ब्लग - यो पृष्ठ हो जहाँ तपाइँका पोष्टहरू प्रदर्शित हुनेछन्, र कुनै पनि प्रमुख प्रदायक प्रदायकसँग त्यहाँ थुप्रै प्रदर्शन विकल्पहरू छन्। नेभिगेट गर्न र पाठकलाई सजिलो बनाउनुहोस् तल तपाइँको पृष्ठ। तपाईले उनीहरूलाई स्क्रोल गर्ने चाहानुहुन्छ जुन उनीहरूको रुचि छ कि उनीहरूको रुचि छ, र यो गर्ने राम्रो तरिकाले साइडबारहरू (धेरै विषयवस्तुहरूमा उपलब्ध) सिर्जना गरेर, वा "डाउनहिल" आँखा आउन जारी राख्ने कार्यमा कल गर्दछ।
हाम्रोबारे - यो कुनै पनि ब्लगमा सबैभन्दा ठूलो ट्र्याक गरिएको पृष्ठहरू मध्ये एक हो, किनभने तपाईंको ब्लग मनपर्ने व्यक्ति स्रोतको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ। यकीन गर्नुहोस् कि यो मजा र सूचनात्मक छ, र पाठक जस्तै लाग््छ जहाँ एक तरिका मा राखिएको छ तिनीहरूले तिनीहरूले पढेका छन् जब तपाईं के हो भन्ने भावना छ।
सम्पर्क Google ले उनीहरूको एल्गोरिथ्ममा सम्पर्क पृष्ठहरू समावेश गर्दछ, र तपाइँ निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईंका पाठकहरूले तपाईंलाई पुग्न सक्छन्। यो सामान्यतया एक थप आधारभूत पृष्ठ हो, तर यो पनि मीडिया र विज्ञापनदाताहरूको लागि जानकारी समावेश हुन सक्छ जुन तपाईंको साथ काम गर्न चासो हुन सक्छ!
गन्तव्यहरू - यदि तपाईं यात्रा ब्लग सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ आफ्ना पाठकहरू जान्न चाहानुहुन्छ कुन स्थानहरू तपाइँ जान्दछन्। त्यहाँ यस पृष्ठलाई डिजाइन गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन् जुन त्यहाँ अनलाइन ब्लगहरू छन्, त्यसैले एउटा आधारभूत विचार भेट्टाउनुहोस्, राम्रो नक्शा प्लगइन प्राप्त गर्नुहोस् (हामी अन्तरक्रियात्मक नक्साहरू प्रयोग गर्छौं), र ती स्थानहरूसँग सम्बन्धित लेखहरूमा जडान गर्न पृष्ठको रूपमा यो प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
गोपनीयता पृष्ठ - यो एक मानक प्रयोगकर्ता सम्झौता पेज हो जसले व्यक्तिलाई तपाईंको साइटमा लागू कानुनहरू, तपाइँ कुकीजहरू आदि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर थाहा दिन्छ। तपाईं इन्टरनेटमा बक्स उदाहरणहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
प्रतिलिपि अधिकार पृष्ठ - यो एक मानक पृष्ठ हो जसले व्यक्तिलाई तपाइँलाई यो कामको स्वामित्व थाहा छ र चोरी गर्न सक्दैन। तपाईं इन्टरनेटमा बक्स उदाहरणहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ धेरै अन्य पृष्ठहरू छन् जुन तपाईं सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ, तर समयले तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ। हामी माथि हौं सत्तरी हाम्रो साइटमा पृष्ठहरू, र हामी फिट देख्दा थप्न जारी राख्छ। यदि तपाईंलाईसँग होस्टहोस्ट जस्तो ठोस होस्ट छ भने, यसले प्रदर्शनको लागि कुनै पनि समस्यालाई असर गर्दैन।
कुनै सफल ब्लगर चट्टान सामाजिक संजाल। त्यहाँ त्यहाँ थुप्रै विकल्पहरू छन्, तपाइँ फेला पार्नुहुनेछ कि तपाईंको ब्लगको शैली अरुमा केही ढाँचाहरूमा बढी सफल हुन्छ। हाम्रो लागि, इन्स्टाग्राम एउटा विशाल ड्र्याग र फेसबुक हो। चहचहानामा हामीले राम्रो तवरमा पछ्याउनुपर्दा, सङ्गठन सामान्यतया फेसबुक वा इन्स्टाग्राम भन्दा कम छ।
बनाउन निश्चित तपाईंको लेख साझेदारी गर्न Google+ खाता सिर्जना गर्न। Google ले Google लाई माया गर्दछ, र तपाईंको लेख यहाँ राख्नाले खोज रैंकिंगमा आफ्नो स्थिति बढाउन मद्दत गर्नेछ।
तपाईंको आलाको लागि कुन कामहरूमा निर्भर गर्दछ, अन्य विकल्पहरू यसमा समावेश छन्:
तपाईंले जो पनि निर्णय गर्नुभयो भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफैलाई पनि छिटो नै फैलिनु हुँदैन। यदि तपाइँ एक माध्यम (फाउन्डेशन, उदाहरणका लागि) मा फ्युल्ड पाउनुहुन्छ भने, तपाइँ त्यहाँ बढ्दै दर्शकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको अन्य सोशल मिडिया प्रस्तुतिलाई संकेत गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तिनीहरू व्यवस्थित हुनुहोस्, तथापि गतिमै गतिमा।
मिडिया अपलोड गर्दै
मानिसहरू भिजुअल छन्, र तपाइँ जान्न चाहनुहुन्छ कि तपाईको ब्लगमा गुणस्तर फोटो अपलोड गर्ने बारे। यी या त तपाइँको हुन सक्छ, वा फ्लिकरको "क्रिएटिव कमन्स" मार्फत सार्वजनिक डोमेनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईं तस्बिरहरू खरीद गर्न पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो हुन्छ साँच्चै महंगी, छिटो।
तपाईंको पहिलो पोस्ट सिर्जना गर्दै
एकपटक तपाईंले यो आधार स्थापना गरेपछि, अहिले यो समय हो लेख्न। तपाइँ कुनै पनि चीजमा पोष्ट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, र धेरै ब्लगरकर्ताले यो कसको बारेमा पोष्ट लेख्न सफल भए।
तपाईं आफ्नो पाठकहरू तपाईंको बारेमा जान्न चाहन्छु, निस्सन्देह, र एक गोल लेख्नुहोला लक्ष्य र साइटको उद्देश्यमा छलफल गर्दै, साथै तपाईंको पृष्ठभूमि दुवै प्राधिकरणलाई स्थापना गर्दछ र उनीहरूलाई रूचि हुनुपर्छ किनकि पाठकलाई सूचित गर्दछ।
चरण 8 - दिन एक भन्दा राम्रो अभ्यास
एकपटक तपाईंको पहिलो पोस्ट जाने पछि तयार भएपछि, साइन-अपको लागि नामाडिक मैटको कोर्स, र सामाजिक सञ्जालमा काम राख्न शुरू गरेको छ, यो अभिनय सुरु गर्न र एक सफल ब्लगर जस्तै सोच्ने समय हो।
यो सत्य हो कि तपाईं सबै दिन लामो बारेमा सोच्नु हुन्छ, इतिहास को माध्यम ले धेरै शानदार मान्छे द्वारा चिन्ता को रूप मा, र यो एक महान ब्लगर जस्तै अभिनय र सोच शुरू गर्न को शुरुवात को शुरुवात शुरुवात हो। तपाईंको विचारहरूको दिशाले तपाईंका कार्यहरूको मार्गदर्शन गर्नेछ, र तपाईंका कार्यहरूले तपाईंको परिणामलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। अन्ततः, यो तपाईंको मानसिकता संग सुरु हुन्छ जुन तपाईंको विश्वास र प्रतिबद्धता छ, यो तपाईंलाई रोक्न के निर्धारण गर्दछ।
इन्फ्लूएन्डर र अन्य ब्लगरका साथ कनेक्ट गर्नुहोस्
सामाजिक सञ्जाल अन्य ब्लगरहरू र प्रभावकारीहरूसँग जोड्नको लागि आदर्श उपकरण हो। तिनीहरूको लेखमा टिप्पणी गर्नुहोस्, उनीहरूको सामग्री साझा गर्नुहोस्, र उनीहरूको समुदायमा उपस्थित हुनुहोस्। बन्नुहोस् धेरै सक्रिय मीडिया मा सक्रिय, तर एक उद्देश्य संग। तिनीहरूलाई उठाउन मद्दत गरेर अन्य मानिसहरूलाई मद्दत गर्न इच्छुक हुनुहोस्, र तपाईं उच्च र उच्च आफैलाई उठाउनुहुनेछ।
कठिन समयहरूसँग व्यवहार गर्दै
जस्तै हामीले भनेका छौं, यो गाह्रो छ। यदि यो सजिलो थियो भने, सबैलाई र सबैले संसार यात्रा गर्दा प्रति वर्ष मिलियन डलर गर्दछन्।
यो होइन। यो कठिन छ। धेरै कडा।
अन्ततः तपाईंको सफलता वा विफलता तपाईंको स्पंज हुनु, सफलताको लागि खुला हुन, र असफलता को निर्धारण गर्नेछ। विफलताले तपाइँलाई पाठ सिकाउनेछ, र ब्लगिङमा यो अपरिहार्य छ। त्यहाँ सोच्ने पोस्टहरू छन् सुन, र तिनीहरूले फ्लप गर्नेछन्। आज तपाइँलाई मनपराउने योजना योजनाहरू तीन महिनामा तपाईंको लागि भयानक देखिन्छ। तपाईं टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न वा "बल डाउनफील्ड घुमाउन हप्तासम्म जानुहुन्छ"।
त्यो कुनै पनि कुरा होइन। तपाईंको निरन्तरता र, जुन तपाईले सधैं सफल हुनेछ अर्को सफल क्षणमा। ती क्षणहरू, तिनीहरू आउँदा, तपाईंलाई कल्पना गर्न सक्नु भन्दा राम्रो महसुस गर्दछ। पोस्टको जस्तो तपाईंले प्रेम गर्नुभएन कि वायरल गए। डिजाईन प्लान तपाईले त्यो बounce दर र ड्रग अप चलाउन बारे निश्चित हुनुहुन्न। तपाईं एक पङ्क्तिमा दिन जानुहुन्छ, हप्तामा हप्ता जहाँ तपाईं बेस्सन्देही जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ।
सधैं ती क्षणहरूमा काम गर्नुहोस्, र तिनीहरू आउँदा उनीहरूको आनन्द लिनुहोस्। समय बित्छ, तपाईंको निरन्तर इनाम हुनेछ।
चरण9- मजा गर्नुहोस्
यात्रा ब्लगिंग कडा छ, हो, तर तपाईंले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने बारे सोच्नुहोस्? तपाईं प्रभाव लिनु हुन्छ। प्रेरित गर्नुहोस्। उत्प्रेरित गर्नुहोस्। तपाईं मानिसहरूलाई संसारमा खोल्न प्राप्त गर्नुभएन जुन तिनीहरूले कहिल्यै सोचेनन्। यदि पनि एक व्यक्ति तपाईंको कामबाट सारिएको छ भने, कसरी कति सुन्दर छ?
अब, 100 को बारेमा सोच्नुहोस्।
1,000 को बारेमा सोच्नुहोस्।
त्यहाँ पहाड र घाटी हुनेछ, यकीन छ कि। तर, तपाईं किन यो गर्दै हुनुहुन्छ याद राख्नुहुन्छ, र अनौठो अवसर यो संसारको यात्रा ल्याउन चाहन्छ। एकपटक चीजहरू बन्द भएपछि, काम यसको लायक छ। बाटोको साथ, यो सम्झना र सफलता दृश्यात्मक। प्रायः महत्वपूर्ण, तथापि, यसको साथमा मजा छ।
बाटोको साथ प्रयोग, जान्दछ कि तपाईंले काम गर्ने केहि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सज्जन वा साहसी हुन डरो नगर्नुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आफैलाई नबिर्सनुस्
जब सफलता हुन्छ, यो हुन किनकि तपाईंले यो मजाक बनाउनुभयो - न केवल पाठकको लागि, तर आफैले लागि।
श्रेणी: सर्वाधिक लोकप्रिय, यात्रा ब्लगिङ टैग: bluehost, यात्रा ब्लगिङ, WordPress
← अमेजनबाट दक्षिण अफ्रिकामा कसरी आदेश
10 पछ्याउने सुझावहरू पहिलो समयको लागि भुटानमा यात्रा गर्दा →
2 टिप्पणिहरु "कसरी यात्रा ब्लग सुरु गर्न"
अगस्ट 23, 2017
ती उत्कृष्ट सुझावहरू छन्! मैले मेरो ब्लग सुरू गरेँ, विशेष गरी नामको नाम चयन गर्दा यो पढ्नु पर्छ! म साथीहरूसँग साझेदारी गर्नेछु।
धन्यवाद Zascha! तपाईंले पोस्टको आनन्द लिनुभयो!